UN Security Council - Dr. Tun Myint, Carleton College, MN
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကို ကျော်လွှားလွန်မြောက်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို ပြန်လည်တက်လှမ်းနိုင်ရေးမှာ နိုင်ငံတကာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို ပစ်ပယ်ထားလို့ မရပါဘူး။ ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့ အတူယှဉ်တွဲပါဝင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Minnesota ပြည်နယ် Carlton ကောလိပ်က နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့ နိုင်ငံသကာဆက်ဆံရေး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာထွန်းမြင့်က ပြောပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒေါက်တာထွန်းမြင့်နဲ့ ဦးကျော်ဇံသာတို့ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
မေး ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု ပြောင်းလဲကျော်လွှာနိုင်မှုဆိုပြီးတော့ ဒေသအသီးသီးမှာ လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှုတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ တဘက်ကလဲ နိုင်ငံတကာဖိအားကလည်း ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့၊ တချို့ ကလဲ နိုင်ငံတကာဖိအားကို အားမရကြဘူး။ နိုင်ငံတကာဖိအားက ဘာမှမထိရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ပါမောက္ခတယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့  ဖိအားဟာ တကယ်ပဲ အသုံးမကျတဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားပြီလားဆိုတာကို မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စပြီးသုံးသပ်ပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ မရောက်ပါဘူး။ အသုံးမကျတဲ့ အခြေအနေကို မရောက်ပါဘူး။ နောက်တခုက နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအားကို ကျနော်တို့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖိအားမျိုးကို ကျနော်တို့က အခြေခံပြီးတော့ ပြောကြသလဲဆိုတဲ့ပေါ် အခြေခံပြီးတော့ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ လုံခြုံရေးကောင်စီကနေ ဦးဆောင်ပြီးတော့ စစ်ကောင်စီကို လက်နက်ရောင်းချဖို့ရာအတွက် ချက်ချင်းပိတ်လိုက်တယ်။ Global Arms Embargo လို့ခေါ်တဲ့ဟာကို လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် သိပ်ထိရောက်မှာပေါ့။ အဲဒါက အခုထိ စကားဝိုင်းမှာ ပြောနိုင်တဲ့အဆင့်အထိ မရောက်သေးတဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိတယ်။ နောက်တခုက အဲဒါနဲ့ တပြိုင်နက်ထဲပဲ စစ်ကောင်စီရဲ့  ခေါင်းဆောင်တွေ၊ မိသားစုဝင်တွေ။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ စီးပွားရေးအားလုံးကို targeted sanction တိကျပြီးတော့ အချက်အလက်ကို မူတည်ပြီးတော့လုပ်မယ့် စီးပွားရေးပိတ်စို့မှုမျိုးပါ တခါတည်းလိုက်တယ်ဆိုရင် ထိရောက်မှုက ချက်ချင်းရောက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကို နိုင်ငံတကာမှာ စီးပွားရေးပိတ်စို့မှုတွေကို လုပ်နေတာတွေ တွေ့ရတယ်။ သူ့အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မပြည့်စုံသေးဘူး။ နောက်တခုက မြန်မာစစ်တပ်ကို ရုရှားက လက်နက်ရောင်းနေတာ ရှိတယ်။ တရုတ်က ရောင်းနေတာ ရှိတယ်။ အစ္စရေးလ်က၊ အိန္ဒိယ ရောင်းနေတာ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေအားလုံး ရပ်တန့်ကရပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ sanction ကို ကုလသမဂ္ဂက ဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ Arm Embargo လာတယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ထိရောက်တဲ့ International Pressure လို့ ကျနော်တို့ သုံးသပ်လို့ ရပါတယ်။
မေး ။ ။ ဒါပေမဲ့ အထူးသဖြင့်တော့ တရုတ်၊ ရုရှားတို့ အဲဒီ့နှစ်နိုင်ငံကို ဖိအားပေးလို့ ရပါ့မလား။ နိုင်ငံတကာက အဲဒီနှစ်နိုင်ငံကို လက်နက်မရောင်းနဲ့ ဆိုတဲ့သဘောမျိုး ပြောဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ အထူးသဖြင့် ရုရှားဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးမပြေလည်မှု ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့အတွက် အခွင့်ကောင်းလို့ ယူဆပြီးတော့ ပိုပြီးတော့ လက်နက်ရောင်းတာကို အရှိန်မြှင့်လာတယ်လို့ သုံးသပ်စရာ ဖြစ်နေတာပါ။ အဲဒါကော ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
ဖြေ ။ ။ ဗြုန်းကနဲ ဖြစ်နိုင်ဖို့ကတော့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့  စစ်ကောင်စီက ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက ပြည်သူလူထုရဲ့  အသက်အိုးအိမ်စည်စိမ်ကို သတ်ဖြတ်နေတာတွေ၊ ဖျက်ဆီးနေတာတွေ၊ နောက်တခုက လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေ ချိုးဖောက်နေတာတွေ၊ နောက် crimes, humanities လူသားတွေရဲ့ သိက္ခာကို စော်ကားတဲ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ လုပ်နေတာတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ war crimes စစ်ရေးရာဇဝတ်မှုတွေ ချိုးဖောက်မှုတွေ လုပ်နေတာတွေကို အချက်အလက်အရ သက်ဆိုင်ရာ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေက နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ မျက်မြင်ထင်ရှား ဖြစ်လာအောင် လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် reports တွေ တင်ပြီးတော့၊ ရေးပြီးတော့ လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါတွေက UN Security Council အဆင့်အထိ ဆွေးနွေးလာရမယ့်အချက်မျိုး ဖြစ်လာမယ်။ အဲဒီတော့ ဒီမေးခွန်းနဲ့ အဖြေကို ချိန်ဆပြီးတော့ ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကုလသမဂ္ဂလို အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့  လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ကျနော်တို့အနေနဲ့ ချိန်ဆပြီးတော့ ကျနော်တို့ သုံးသပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆူဒန်နိုင်ငံ ဒါဖောကိစ္စ။ နောက်တခါ ကမ္ဘောဒီးယား Genocide ဖြစ်တာတွေ အခြေခံပြီးတော့ ပြောလို့ရတယ်။ Kosovo မှာ ဖြစ်တာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်း ပြောနိုင်တယ်။ အဲဒါတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အချိန်မနည်းဘူး ယူခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး နောက်ဆုံးအထိ ဖြစ်လာအောင်။ အဲဒီတော့ လက်ရှိတော်လှန်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံအနေနဲ့ သူတို့လုပ်နိုင်တာ၊ လုပ်သင့်တာတွေအားလုံးကို လုပ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီး၊ တရားရေးရာဝန်ကြီးတို့ရဲ့  ဌာနဆိုင်ရာတွေ လုပ်နေတာတွေကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒါတွေက မြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာသိလာအောင်၊ ရှင်းအောင်ပြောပြနိုင်တယ်ဆိုရင် ထိရောက်လာမယ်။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကို အရေးတယူလုပ်ချင်တဲ့ နိုင်ငံတွေအများကြီး ရှိပေအုံးပေါ့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာကြတော့ တရုတ်၊ ရုရှားတို့က ဗီတိုအာဏာ ပိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ ဒီကိစ္စက ဘယ်လောက်အဟန့်အတား ဖြစ်စေနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောပါအုံး။
ဖြေ ။ ။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရုရှားနိုင်ငံတို့ဆိုတာက ဘယ်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဗီတိုအာဏာ (Veto Power) ကို သုံးလေ့ရှိသလဲဆိုရင် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်ရဲ့  အခန်း (၁) Article (၂), Clause (7) ကို ကြည့်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်လေ့ ရှိတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့  အချုပ်အခြာအာဏာကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တဲ့ ပုံစံမျိုး ဘယ်နည်းနဲ့မှ မလုပ်ရဘူး - Non-interference. သို့သော် အဲဒီနိုင်ငံရဲ့  အစိုးရတရပ်သည်လည်းကောင်း၊ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့  အစိုးရလို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုသည်လည်းကောင်း နိုင်ငံတကာရဲ့  ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရပ်တွေကို တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်ပြီးသော်လည်းကောင်း ထိခိုက်လာနိုင်စရာ ရှိလာတယ်ဆိုရင် တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြဌာန်းထားတယ်။ အဲဒီတော့ တရုတ်နဲ့ ရုရှားကို အဲဒီလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို သိသာအောင်က ASEAN ကိုယ်တိုင်က အသိအမှတ် ပြုထားတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  အရေးဟာ အာဆီယံရဲ့ အရေး ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အချက်ကြီး (၅) ချက်နဲ့ မတ်လကတည်းက ထုတ်ထားတာ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ဒါတွေကို ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တရုတ်နဲ့ ရုရှားက သူတို့လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကို ကျနော်တို့ သဘောပေါက်ရမယ်။
မေး ။ ။ အဲဒီအဆင့်အထိ မရောက်နိုင်ခင်မှာ အာဆီယံကို ဦးတည်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့  consensus ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ မူ (၅) ချက်အတိုင်း လိုက်နာဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတိုက်အခံတွေနဲ့ စစ်ကောင်စီက ဆွေးနွေးဖို့ စသည်ဖြင့်၊ နောက်ပြီးတော့ အာဆီယံက ကိုယ်စားလှယ်လာရင် ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ စတဲ့ အဲဒီလိုင်းကိုလည်း တရုတ်၊ ရုရှားတို့က တွန်းပေးနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ထိပ်တန်းထားပြီးတော့။ အထူးသဖြင့် တရုတ်က ဒါကိုပဲ ဦးစားပေးပြီးတော့ ပြောနေကြတာ ရှိပါတယ်ဆိုတော့ စောစောက ဒေါက်တာထွန်းမြင့်ပြောတဲ့အဆင့်အထိ ကုလသမဂ္ဂ ပြဌာန်းချက်အတိုင်း အကုန်လုံး ဒီလိုအရေးမယူနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ အာဆီယံကို ဦးတည်ပြီးတော့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆွေးနွေးဖို့ ပြောနေတဲ့ကိစ္စက ဘယ်လောက်အလားအလာ ရှိနိုင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါကတော့ သူတို့အကြောဆန့်သလောက်ပါပဲ။ နိုင်ငံရေးအပြင်ပြေ ဆွဲဆန့်သလောက်ပါပဲလို့ ကျနော်တို့ ကြည့်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့က အဲဒီလိုမျိုး အာဆီယံရဲ့  (၅) ချက်ကို သဘောတူတယ်ဆိုတာက ရှင်းရှင်းပြောရရင် စစ်ကောင်စီအတွက် သတင်းမကောင်းပါဘူး။ ဘာကြောင့် ပြောရသလဲဆိုရင် အာဆီယံ (၅) ချက်ထဲမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အချက်လိုက် ပြောထားတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီအချက်တွေကို မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင် ချိုးဖောက်နေတဲ့အတွက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး ASEAN Summit ကိုလည်း တက်ခွင့်မပေးဘူး။ အခု အာဆီယံနဲ့ တရုတ် လုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးကိုလည်း အာဆီယံက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောထားတယ်။ သူတို့ လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ။ အဲဒီတော့ တရုတ်က မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကို နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ ယိုင်းလာတဲ့ပုံစံ ရှိတယ်။ အဲဒါကို ခြုံပြောရရင် ဒါကတော့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗျူရိုကရေစီတွေရဲ့  လုပ်ငန်းစဉ်တွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ ဒါမျိုးစကားတွေက တွေ့ကြုံရတယ်။ ဒါမျိုးထုတ်ပြန်ချက်တွေကို တွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတဲ့ လမ်းတွေပါ။ ဒီလမ်းတွေကိုကြည့်ပြီး ကျနော်တို့အနေနဲ့ အားငယ်စရာလည်း မလိုဘူး။ တအားကြီးအားတက်စရာလဲ မလိုဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာရဲ့  လုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာက ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အရှိန်အဟုန်က ဘယ်လောက်အထိ ရှိသလဲဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီးတော့၊ ပြည်တွင်းက ရေချိန်ကို ကြည့်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်တာ၊ လုပ်ကြတာ ဖြစ်တယ်။ စကားပြောကြတာ ဖြစ်တယ်။ သို့သော် တခုတော့ရှိတယ် - စစ်ရေးအရ ဝင်ရောက်ရမယ့် အခြေအနေကို ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ Chapter (7) Intervention အဆင့်အထိ ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ အဖွဲ့တဖွဲ့ကသော်လည်းကောင်း - ဥပမာ NATO လို အဖွဲ့မျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတနိုင်ငံ - ဥပမာ US လိုမျိုး ဝင်ပြီးတော့ လုပ်ကြမယ့်လုပ်ငန်းတွေ ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့  မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရပ်တည်ချက်၊ မြန်မာပြည်သူ တော်တော်များများက အားမရကြပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ မကြာသေးခင်က Bill Richardson လာပြီးတော့ သူတို့ရဲ့  နိုင်ငံသား သတင်းသမားကို ခေါ်ထုတ်သွားတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာမှတစွန်းတစ မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သူ့ခရီးစဉ်က အကျိုးမရှိတဲ့အပြင်၊ စစ်ကောင်စီကို အသိအမှတ်ပြုချင်တဲ့သဘောသာ ပိုပြီးဆန်တယ်လို့ ဘဝင်မကျ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ဒေါက်တာထွန်းမြင့် ဘယ်လိုသုံးသပ်လိုပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ သူ့ခရီးစဉ်က အမေရိကန်အစိုးရရဲ့  ပေါ်လစီကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လုပ်ငန်းကို သွားလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့  ပုဂ္ဂလိက၊ သူ့ Center – Former Diplomat တယောက်အနေနဲ့ လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာက သူက ရှင်းထားတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းက သူတို့ရဲ့  interest စိတ်ဝင်စားမှု၊ သူတို့ လုပ်နိုင်တဲ့၊ လုပ်ရမယ့်ကိစ္စကို အရင်ဆုံးဦးစားပေး လုပ်မှာပဲ။ အဲဒီလို လုပ်တာကိုက ကျနော်တို့ တော်လှန်ရေး လုပ်နေကြတဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် ကောင်းတဲ့သဘောဆောင်တယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ငြိမ်မနေဘူး။ လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်နေမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားပဲ။ သို့သော်လဲပဲ အခုန ကျနော်မြှင့်ပြီးတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးက ချက်ချင်းပဲ မြန်မာစစ်ကောင်စီကို ဝင်ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကို ချက်ချင်းကြီး မျှော်လင့်လို့ မရဘူး။ ဒီမိုကရေစီအင်အားတွေကို အားပေးတဲ့သဘောမျိုး သက်ရောက်တယ်လို့ပဲ သုံးသပ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
မေး ။ ။ အလားတူစွာပဲ မစ္စတာဆာဆာကာဝါရဲ့  ခရီးစဉ်ကိုလည်း သုံးသပ်ပေးပါအုံး။
ဖြေ ။ ။ ကြည့်ရတာကတော့ Second Track Diplomacy အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ - ဥပမာ Richardson ထွက်တဲ့ ခရီးက Noeleen Heyzer ကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်က ခန့်ပြီးတော့ တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ Richardson ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ သူတို့ Diplomats တွေ အချင်းချင်း၊ နော်လင်းဟေဇာတို့ ရစ်ချက်ဆင်တို့ သိလိမ့်မယ်။ သူတို့ ကုလသမဂ္ဂမှာအတူတူ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့လူတွေ ဖြစ်တယ်။ နောက်တခုက ဂျပန်မှာ ရှိနေတဲ့ ဆာဆာကာဝါတို့ရဲ့  Diplomatic Connection ကို အတိအကျ မသိတဲ့အတွက် မှန်းဆပြီးတော့ပဲ သုံးသပ်ပြရမယ့် အနေအထားမျိုး ဖြစ်တယ်။ မှန်းရမှာ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ နော်လင်းဟေဇာကို ခန့်ပြီးတော့၊ ရစ်ချက်ဆင် သွားပြီးတော့ ဆာဆာကာဝါ ရောက်တယ်။ နောက် ထိုင်း ဒုတိယဝန်ကြီးသွားတယ်။ ထိုင်းဝန်ကြီးသွားပြီးတော့ တရုတ်ကလည်း စစ်ကောင်စီဘက်ကို ဦးတည်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် Agenda တင်လာတဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီလိုမျိုး ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် မစ္စတာဆာဆာကာဝါ၊ ရစ်ချက်ဆင်၊ နော်လင်းဟေဇာတို့ရဲ့  Track က Track2Diplomacy မျိုး အဆင့်လောက် ရှိတယ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောလို့ရတာပေါ့။ အဲဒီတော့ သူတို့လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  ပြဿနာဟာ မအေးဘူး၊ နိုင်ငံတကာရဲ့  ပြဿနာတခု ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေ လက်ခံပြီးတော့ လုပ်နေတယ်လို့ ကျနော်တို့ မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။
မေး ။ ။ အခု ဒေါက်တာထွန်းမြင့် သုံးသပ်လာတာတွေ အကုန်လုံးကို ခြုံကြည့်ရင် နိုင်ငံတကာရဲ့  ဖိအားဟာ လုံးဝအသုံးမကျဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ ပစ်ပယ်ထားစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ဒါဟာလဲ ထိရောက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ တချိန်တည်းမှာပဲ ပြည်တွင်းမှာလည်း ရရာလက်နက် ကိုင်စွဲပြီးတော့ တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ အင်အားစုတွေလည်း ရှိပါတယ်ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့  အနေအထားကိုကော ဘယ်လိုသုံးသပ်လိုပါသလဲ။ ဒီဟာက သိပ်ပြီးတော့ ထိရောက်နိုင်သလား။ နိုင်ငံတကာနဲ့ Side-by-Side တွဲပြီး သွားရမလား။ သို့တည်းမဟုတ် နိုင်ငံတကာကို ပစ်ပယ်ပြီးတော့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးနဲ့ပဲ လွှမ်းခြုံနိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်မှု၊ ယူဆမှုကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ Side-by-Side သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက အရှိန်မြှင့်မှသာလျှင် ပြည်ပကနေ အရေးထားလာမှာ ဖြစ်တယ်။ ပြည်တွင်းမှာ အခုဖြစ်နေတဲ့ Defensive War လို့ပဲပြောပြော၊ Guerrilla စစ်လို့ပဲပြောပြော အဲဒါတွေက အခရာကျပါတယ်။
လကျရှိ မွနျမာ့နိုငျငံရေး အကပျြအတညျးကို ကြျောလှားလှနျမွောကျပွီး၊ ဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးကို ပွနျလညျတကျလှမျးနိုငျရေးမှာ နိုငျငံတကာရဲ့အခနျးကဏ်ဍကို ပဈပယျထားလို့ မရပါဘူး။ ပွညျတှငျးလှုပျရှားမှုနဲ့ အတူယှဉျတှဲပါဝငျဖို့ လိုအပျတယျလို့ အမရေိကနျပွညျထောငျစု Minnesota ပွညျနယျ Carlton ကောလိပျက နိုငျငံရေးသိပ်ပံနဲ့ နိုငျငံသကာဆကျဆံရေး ပါမောက်ခ ဒေါကျတာထှနျးမွငျ့က ပွောပါတယျ။ အသေးစိတျကို ဒေါကျတာထှနျးမွငျ့နဲ့ ဦးကြျောဇံသာတို့ ဆှေးနှေးသုံးသပျထားပါတယျ။
မေး ။ ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈနတေဲ့ နိုငျငံရေး ထိပျတိုကျရငျဆိုငျမှု ပွောငျးလဲကြျောလှာနိုငျမှုဆိုပွီးတော့ ဒသေအသီးသီးမှာ လကျနကျကိုငျပုနျကနျမှုတှေ ဖွဈနပေါတယျ။ တဘကျကလဲ နိုငျငံတကာဖိအားကလညျး ရှိနပေါတယျဆိုတော့၊ တခြို့ကလဲ နိုငျငံတကာဖိအားကို အားမရကွဘူး။ နိုငျငံတကာဖိအားက ဘာမှမထိရောကျနိုငျတော့ဘူးလို့ စိတျပကျြလကျပကျြ ဖွဈနကွေပါတယျ။ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေး ပါမောက်ခတယောကျအနနေဲ့ နိုငျငံတကာရဲ့ ဖိအားဟာ တကယျပဲ အသုံးမကတြဲ့အဆငျ့ကို ရောကျသှားပွီလားဆိုတာကို မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ စပွီးသုံးသပျပေးပါ။
ဖွေ ။ ။ မရောကျပါဘူး။ အသုံးမကတြဲ့ အခွအေနကေို မရောကျပါဘူး။ နောကျတခုက နိုငျငံတကာရဲ့ဖိအားကို ကနြျောတို့ ကွညျ့မယျဆိုရငျ ဘယျလိုဖိအားမြိုးကို ကနြျောတို့က အခွခေံပွီးတော့ ပွောကွသလဲဆိုတဲ့ပျေါ အခွခေံပွီးတော့ မူတညျပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီတော့ လုံခွုံရေးကောငျစီကနေ ဦးဆောငျပွီးတော့ စဈကောငျစီကို လကျနကျရောငျးခဖြို့ရာအတှကျ ခကျြခငျြးပိတျလိုကျတယျ။ Global Arms Embargo လို့ချေါတဲ့ဟာကို လုပျတယျဆိုလို့ရှိရငျ သိပျထိရောကျမှာပေါ့။ အဲဒါက အခုထိ စကားဝိုငျးမှာ ပွောနိုငျတဲ့အဆငျ့အထိ မရောကျသေးတဲ့ အနအေထားမြိုး ရှိတယျ။ နောကျတခုက အဲဒါနဲ့ တပွိုငျနကျထဲပဲ စဈကောငျစီရဲ့ ခေါငျးဆောငျတှေ၊ မိသားစုဝငျတှေ။ နောကျပွီးတော့ သူတို့နဲ့ ပတျသကျနတေဲ့ စီးပှားရေးအားလုံးကို targeted sanction တိကပြွီးတော့ အခကျြအလကျကို မူတညျပွီးတော့လုပျမယျ့ စီးပှားရေးပိတျစို့မှုမြိုးပါ တခါတညျးလိုကျတယျဆိုရငျ ထိရောကျမှုက ခကျြခငျြးရောကျနိုငျပါတယျ။ အဲဒီအတှကျကို နိုငျငံတကာမှာ စီးပှားရေးပိတျစို့မှုတှကေို လုပျနတောတှေ တှရေ့တယျ။ သူ့အဆငျ့လိုကျအဆငျ့လိုကျပေါ့။ ဒါပမေဲ့ မပွညျ့စုံသေးဘူး။ နောကျတခုက မွနျမာစဈတပျကို ရုရှားက လကျနကျရောငျးနတော ရှိတယျ။ တရုတျက ရောငျးနတော ရှိတယျ။ အစ်စရေးလျက၊ အိန်ဒိယ ရောငျးနတော ရှိတယျ။ အဲဒါတှအေားလုံး ရပျတနျ့ကရပျရမယျဆိုတဲ့ sanction ကို ကုလသမဂ်ဂက ဦးဆောငျပွီးတော့လုပျတဲ့ Arm Embargo လာတယျဆိုရငျတော့ သိပျထိရောကျတဲ့ International Pressure လို့ ကနြျောတို့ သုံးသပျလို့ ရပါတယျ။
မေး ။ ။ ဒါပမေဲ့ အထူးသဖွငျ့တော့ တရုတျ၊ ရုရှားတို့ အဲဒီ့နှဈနိုငျငံကို ဖိအားပေးလို့ ရပါ့မလား။ နိုငျငံတကာက အဲဒီနှဈနိုငျငံကို လကျနကျမရောငျးနဲ့ ဆိုတဲ့သဘောမြိုး ပွောဖို့ဆိုတာ ဖွဈနိုငျပါ့မလား။ အထူးသဖွငျ့ ရုရှားဆိုရငျ အနောကျနိုငျငံတှနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံ ဆကျဆံရေးမပွလေညျမှု ဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ သူတို့အတှကျ အခှငျ့ကောငျးလို့ ယူဆပွီးတော့ ပိုပွီးတော့ လကျနကျရောငျးတာကို အရှိနျမွှငျ့လာတယျလို့ သုံးသပျစရာ ဖွဈနတောပါ။ အဲဒါကော ဖွဈနိုငျပါ့မလား။
ဖွေ ။ ။ ဗွုနျးကနဲ ဖွဈနိုငျဖို့ကတော့ မလှယျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ မငျးအောငျလှိုငျရဲ့ စဈကောငျစီက ဖဖေျေါဝါရီလ (၁) ရကျနေ့ အာဏာသိမျးပွီးကတညျးက ပွညျသူလူထုရဲ့ အသကျအိုးအိမျစညျစိမျကို သတျဖွတျနတောတှေ၊ ဖကျြဆီးနတောတှေ၊ နောကျတခုက လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာကိစ်စတှေ ခြိုးဖောကျနတောတှေ၊ နောကျ crimes, humanities လူသားတှရေဲ့သိက်ခာကို စျောကားတဲ့ အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှုတှေ လုပျနတောတှေ၊ နောကျပွီးတော့ war crimes စဈရေးရာဇဝတျမှုတှေ ခြိုးဖောကျမှုတှေ လုပျနတောတှကေို အခကျြအလကျအရ သကျဆိုငျရာ တျောလှနျရေးခေါငျးဆောငျတှကေ နိုငျငံတကာခေါငျးဆောငျတှေ၊ နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးတှေ မကျြမွငျထငျရှား ဖွဈလာအောငျ လုပျတယျဆိုလို့ရှိရငျ reports တှေ တငျပွီးတော့၊ ရေးပွီးတော့ လုပျတယျဆိုလို့ရှိရငျ ဒါတှကေ UN Security Council အဆငျ့အထိ ဆှေးနှေးလာရမယျ့အခကျြမြိုး ဖွဈလာမယျ။ အဲဒီတော့ ဒီမေးခှနျးနဲ့ အဖွကေို ခြိနျဆပွီးတော့ ပွောရမယျဆိုလို့ရှိရငျ အပွညျပွညျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးတှေ၊ အထူးသဖွငျ့ ကုလသမဂ်ဂလို အဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ လုပျနိုငျစှမျးရှိတဲ့ လုပျငနျးနဲ့လုပျရပျတှကေို ကနြျောတို့အနနေဲ့ ခြိနျဆပွီးတော့ ကနြျောတို့ သုံးသပျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ ဆူဒနျနိုငျငံ ဒါဖောကိစ်စ။ နောကျတခါ ကမ်ဘောဒီးယား Genocide ဖွဈတာတှေ အခွခေံပွီးတော့ ပွောလို့ရတယျ။ Kosovo မှာ ဖွဈတာတှကေိုကွညျ့ပွီးတော့လညျး ပွောနိုငျတယျ။ အဲဒါတှကေို ကွညျ့မယျဆိုရငျ အခြိနျမနညျးဘူး ယူခဲ့ရပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး နောကျဆုံးအထိ ဖွဈလာအောငျ။ အဲဒီတော့ လကျရှိတျောလှနျရေးဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးပေါငျးစုံအနနေဲ့ သူတို့လုပျနိုငျတာ၊ လုပျသငျ့တာတှအေားလုံးကို လုပျနတော တှရေ့တယျ။ အထူးသဖွငျ့ NUG လူ့အခှငျ့အရေးဝနျကွီး၊ တရားရေးရာဝနျကွီးတို့ရဲ့ ဌာနဆိုငျရာတှေ လုပျနတောတှကေို တှရေ့တယျ။ အဲဒါတှကေ မွိုငျဆိုငျပွီးတော့ နိုငျငံတကာသိလာအောငျ၊ ရှငျးအောငျပွောပွနိုငျတယျဆိုရငျ ထိရောကျလာမယျ။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးမှာ မွနျမာနိုငျငံကိစ်စကို အရေးတယူလုပျခငျြတဲ့ နိုငျငံတှအေမြားကွီး ရှိပအေုံးပေါ့ လုံခွုံရေးကောငျစီမှာကွတော့ တရုတျ၊ ရုရှားတို့က ဗီတိုအာဏာ ပိုငျထားတယျဆိုတော့ ဒီကိစ်စက ဘယျလောကျအဟနျ့အတား ဖွဈစနေိုငျမယျဆိုတာကိုလညျး ပွောပါအုံး။
ဖွေ ။ ။ တရုတျနိုငျငံ၊ ရုရှားနိုငျငံတို့ဆိုတာက ဘယျအပျေါမှာ မူတညျပွီးတော့ ကုလသမဂ်ဂ လုံခွုံရေးကောငျစီမှာ ဗီတိုအာဏာ (Veto Power) ကို သုံးလရှေိ့သလဲဆိုရငျ ကုလသမဂ်ဂ ပဋိညာဉျရဲ့ အခနျး (၁) Article (၂), Clause (7) ကို ကွညျ့ပွီးတော့ ဆုံးဖွတျလေ့ ရှိတယျ။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ နိုငျငံတနိုငျငံရဲ့ အခြုပျအခွာအာဏာကို ဝငျရောကျစှကျဖကျတဲ့ ပုံစံမြိုး ဘယျနညျးနဲ့မှ မလုပျရဘူး - Non-interference. သို့သျော အဲဒီနိုငျငံရဲ့ အစိုးရတရပျသညျလညျးကောငျး၊ အဲဒီနိုငျငံရဲ့ အစိုးရလို့ချေါတဲ့ အဖှဲ့အစညျးတခုသညျလညျးကောငျး နိုငျငံတကာရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးကိစ်စရပျတှကေို တိုကျရိုကျသျောလညျးကောငျး၊ သှယျဝိုကျပွီးသျောလညျးကောငျး ထိခိုကျလာနိုငျစရာ ရှိလာတယျဆိုရငျ တိုကျရိုကျဝငျရောကျပွီးတော့ လုပျဆောငျနိုငျတယျဆိုတာကို ပွဌာနျးထားတယျ။ အဲဒီတော့ တရုတျနဲ့ ရုရှားကို အဲဒီလို မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈနတေယျဆိုတာကို သိသာအောငျက ASEAN ကိုယျတိုငျက အသိအမှတျ ပွုထားတယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အရေးဟာ အာဆီယံရဲ့အရေး ဖွဈတယျဆိုတာကို အခကျြကွီး (၅) ခကျြနဲ့ မတျလကတညျးက ထုတျထားတာ ရှိတယျ။ အဲဒီတော့ ဒါတှကေို ခွုံကွညျ့မယျဆိုရငျ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ တရုတျနဲ့ ရုရှားက သူတို့လုပျခငျြတိုငျး လုပျလို့မရနိုငျဘူးဆိုတာကို ကနြျောတို့ သဘောပေါကျရမယျ။
မေး ။ ။ အဲဒီအဆငျ့အထိ မရောကျနိုငျခငျမှာ အာဆီယံကို ဦးတညျပွီးတော့ သူတို့ရဲ့ consensus ဆုံးဖွတျထားတဲ့ မူ (၅) ခကျြအတိုငျး လိုကျနာဖို့၊ မွနျမာနိုငျငံမှာ အတိုကျအခံတှနေဲ့ စဈကောငျစီက ဆှေးနှေးဖို့ စသညျဖွငျ့၊ နောကျပွီးတော့ အာဆီယံက ကိုယျစားလှယျလာရငျ ထိနျးသိမျးခံနရေတဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ တှဆေုံ့ခှငျ့ပေးဖို့ စတဲ့ အဲဒီလိုငျးကိုလညျး တရုတျ၊ ရုရှားတို့က တှနျးပေးနကွေတာ တှရေ့ပါတယျ။ ထိပျတနျးထားပွီးတော့။ အထူးသဖွငျ့ တရုတျက ဒါကိုပဲ ဦးစားပေးပွီးတော့ ပွောနကွေတာ ရှိပါတယျဆိုတော့ စောစောက ဒေါကျတာထှနျးမွငျ့ပွောတဲ့အဆငျ့အထိ ကုလသမဂ်ဂ ပွဌာနျးခကျြအတိုငျး အကုနျလုံး ဒီလိုအရေးမယူနိုငျသေးတဲ့အခြိနျမှာ အာဆီယံကို ဦးတညျပွီးတော့ ပွနျလညျသငျ့မွတျရေး ဆှေးနှေးဖို့ ပွောနတေဲ့ကိစ်စက ဘယျလောကျအလားအလာ ရှိနိုငျပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ အဲဒါကတော့ သူတို့အကွောဆနျ့သလောကျပါပဲ။ နိုငျငံရေးအပွငျပွေ ဆှဲဆနျ့သလောကျပါပဲလို့ ကနြျောတို့ ကွညျ့ရမှာ ဖွဈတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုရငျ တရုတျနဲ့ ရုရှားတို့က အဲဒီလိုမြိုး အာဆီယံရဲ့ (၅) ခကျြကို သဘောတူတယျဆိုတာက ရှငျးရှငျးပွောရရငျ စဈကောငျစီအတှကျ သတငျးမကောငျးပါဘူး။ ဘာကွောငျ့ ပွောရသလဲဆိုရငျ အာဆီယံ (၅) ခကျြထဲမှာ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ပွောထားတာတှေ ရှိပါတယျ။ အခကျြလိုကျ ပွောထားတာတှေ ရှိတယျ။ အဲဒီအခကျြတှကေို မငျးအောငျလှိုငျကိုယျတိုငျ ခြိုးဖောကျနတေဲ့အတှကျ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေး ASEAN Summit ကိုလညျး တကျခှငျ့မပေးဘူး။ အခု အာဆီယံနဲ့ တရုတျ လုပျတဲ့ အစညျးအဝေးကိုလညျး အာဆီယံက ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ပွောထားတယျ။ သူတို့ လကျမခံနိုငျဘူးဆိုတာ။ အဲဒီတော့ တရုတျက မွနျမာစဈကောငျစီဘကျကို နညျးနညျးပွနျပွီးတော့ ယိုငျးလာတဲ့ပုံစံ ရှိတယျ။ အဲဒါကို ခွုံပွောရရငျ ဒါကတော့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ဗြူရိုကရစေီတှရေဲ့ လုပျငနျးစဉျတှေ လုပျတဲ့အခါမှာ ဒါမြိုးစကားတှကေ တှကွေုံ့ရတယျ။ ဒါမြိုးထုတျပွနျခကျြတှကေို တှကွေုံ့ရတယျဆိုတဲ့ လမျးတှပေါ။ ဒီလမျးတှကေိုကွညျ့ပွီး ကနြျောတို့အနနေဲ့ အားငယျစရာလညျး မလိုဘူး။ တအားကွီးအားတကျစရာလဲ မလိုဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ နိုငျငံတကာရဲ့ လုပျမယျမလုပျဘူးဆိုတာက ပွညျတှငျးမှာရှိတဲ့ အရှိနျအဟုနျက ဘယျလောကျအထိ ရှိသလဲဆိုတာပျေါ မူတညျပွီးတော့၊ ပွညျတှငျးက ရခြေိနျကို ကွညျ့ပွီးတော့ ဆုံးဖွတျတာ၊ လုပျကွတာ ဖွဈတယျ။ စကားပွောကွတာ ဖွဈတယျ။ သို့သျော တခုတော့ရှိတယျ - စဈရေးအရ ဝငျရောကျရမယျ့ အခွအေနကေို ရောကျလာပွီဆိုရငျတော့ Chapter (7) Intervention အဆငျ့အထိ ရောကျလာပွီဆိုရငျတော့ အဖှဲ့တဖှဲ့ကသျောလညျးကောငျး - ဥပမာ NATO လို အဖှဲ့မြိုး၊ ဒါမှမဟုတျ နိုငျငံတနိုငျငံ - ဥပမာ US လိုမြိုး ဝငျပွီးတော့ လုပျကွမယျ့လုပျငနျးတှေ ရှိပါတယျ။
မေး ။ ။ အခုလောလောဆယျမှာတော့ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ မွနျမာ့အရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ရပျတညျခကျြ၊ မွနျမာပွညျသူ တျောတျောမြားမြားက အားမရကွပါဘူး။ ဒီအခြိနျမှာ မကွာသေးခငျက Bill Richardson လာပွီးတော့ သူတို့ရဲ့ နိုငျငံသား သတငျးသမားကို ချေါထုတျသှားတယျ။ မွနျမာနိုငျငံ ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဘာမှတစှနျးတစ မပွောတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒါဟာ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ သူ့ခရီးစဉျက အကြိုးမရှိတဲ့အပွငျ၊ စဈကောငျစီကို အသိအမှတျပွုခငျြတဲ့သဘောသာ ပိုပွီးဆနျတယျလို့ ဘဝငျမကြ ဖွဈကွပါတယျ။ ဒီကိစ်စကို ဒေါကျတာထှနျးမွငျ့ ဘယျလိုသုံးသပျလိုပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ သူ့ခရီးစဉျက အမရေိကနျအစိုးရရဲ့ ပျေါလစီကို ကိုယျစားပွုတဲ့ လုပျငနျးကို သှားလုပျတာ မဟုတျပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ပုဂ်ဂလိက၊ သူ့ Center – Former Diplomat တယောကျအနနေဲ့ လုပျခွငျးဖွဈတယျဆိုတာက သူက ရှငျးထားတယျ။ နိုငျငံတိုငျးက သူတို့ရဲ့ interest စိတျဝငျစားမှု၊ သူတို့ လုပျနိုငျတဲ့၊ လုပျရမယျ့ကိစ်စကို အရငျဆုံးဦးစားပေး လုပျမှာပဲ။ အဲဒီလို လုပျတာကိုက ကနြျောတို့ တျောလှနျရေး လုပျနကွေတဲ့ ပွညျသူလူထုအတှကျ ကောငျးတဲ့သဘောဆောငျတယျ။ သူတို့အနနေဲ့ ငွိမျမနဘေူး။ လုပျစရာရှိတာကို လုပျနမေယျဆိုတဲ့ သဘောတရားပဲ။ သို့သျောလဲပဲ အခုန ကနြျောမွှငျ့ပွီးတော့ အမရေိကနျနိုငျငံကွီးက ခကျြခငျြးပဲ မွနျမာစဈကောငျစီကို ဝငျရှငျးတဲ့ပုံစံမြိုးကို ခကျြခငျြးကွီး မြှျောလငျ့လို့ မရဘူး။ ဒီမိုကရစေီအငျအားတှကေို အားပေးတဲ့သဘောမြိုး သကျရောကျတယျလို့ပဲ သုံးသပျကွညျ့လို့ ရပါတယျ။
မေး ။ ။ အလားတူစှာပဲ မစ်စတာဆာဆာကာဝါရဲ့ ခရီးစဉျကိုလညျး သုံးသပျပေးပါအုံး။
ဖွေ ။ ။ ကွညျ့ရတာကတော့ Second Track Diplomacy အဖှဲ့တှအေနနေဲ့ - ဥပမာ Richardson ထှကျတဲ့ ခရီးက Noeleen Heyzer ကို ကုလသမဂ်ဂ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျက ခနျ့ပွီးတော့ တပတျနှဈပတျအတှငျးမှာ Richardson ထှကျသှားတယျဆိုတော့ သူတို့ Diplomats တှေ အခငျြးခငျြး၊ နျောလငျးဟဇောတို့ ရဈခကျြဆငျတို့ သိလိမျ့မယျ။ သူတို့ ကုလသမဂ်ဂမှာအတူတူ လုပျခဲ့ဖူးတဲ့လူတှေ ဖွဈတယျ။ နောကျတခုက ဂပြနျမှာ ရှိနတေဲ့ ဆာဆာကာဝါတို့ရဲ့ Diplomatic Connection ကို အတိအကြ မသိတဲ့အတှကျ မှနျးဆပွီးတော့ပဲ သုံးသပျပွရမယျ့ အနအေထားမြိုး ဖွဈတယျ။ မှနျးရမှာ ဘယျလိုလဲဆိုတော့ နျောလငျးဟဇောကို ခနျ့ပွီးတော့၊ ရဈခကျြဆငျ သှားပွီးတော့ ဆာဆာကာဝါ ရောကျတယျ။ နောကျ ထိုငျး ဒုတိယဝနျကွီးသှားတယျ။ ထိုငျးဝနျကွီးသှားပွီးတော့ တရုတျကလညျး စဈကောငျစီဘကျကို ဦးတညျပွီးတော့ အလုပျလုပျဖို့အတှကျ Agenda တငျလာတဲ့ပုံစံမြိုး ဖွဈတယျ။ အဲဒီတော့ အဲဒီလိုမြိုး ကွညျ့တယျဆိုလို့ရှိရငျ မစ်စတာဆာဆာကာဝါ၊ ရဈခကျြဆငျ၊ နျောလငျးဟဇောတို့ရဲ့ Track က Track2Diplomacy မြိုး အဆငျ့လောကျ ရှိတယျလို့ ကနြျောတို့ ပွောလို့ရတာပေါ့။ အဲဒီတော့ သူတို့လုပျစရာရှိတာကို လုပျနတေယျဆိုတာကိုလညျး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပွဿနာဟာ မအေးဘူး၊ နိုငျငံတကာရဲ့ ပွဿနာတခု ဖွဈနတေယျဆိုတာကို သူတို့ကိုယျတိုငျကနေ လကျခံပွီးတော့ လုပျနတေယျလို့ ကနြျောတို့ မွငျရမှာဖွဈတယျ။
မေး ။ ။ အခု ဒေါကျတာထှနျးမွငျ့ သုံးသပျလာတာတှေ အကုနျလုံးကို ခွုံကွညျ့ရငျ နိုငျငံတကာရဲ့ ဖိအားဟာ လုံးဝအသုံးမကဘြူးလို့ဆိုပွီးတော့ ပဈပယျထားစရာ အကွောငျးမရှိဘူး။ ဒါဟာလဲ ထိရောကျနိုငျခွငျး ဖွဈတယျလို့ ပွောခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဆိုတော့ တခြိနျတညျးမှာပဲ ပွညျတှငျးမှာလညျး ရရာလကျနကျ ကိုငျစှဲပွီးတော့ တိုကျခိုကျနကွေတဲ့ အငျအားစုတှလေညျး ရှိပါတယျဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ အနအေထားကိုကော ဘယျလိုသုံးသပျလိုပါသလဲ။ ဒီဟာက သိပျပွီးတော့ ထိရောကျနိုငျသလား။ နိုငျငံတကာနဲ့ Side-by-Side တှဲပွီး သှားရမလား။ သို့တညျးမဟုတျ နိုငျငံတကာကို ပဈပယျပွီးတော့ လကျနကျကိုငျ တျောလှနျရေးနဲ့ပဲ လှမျးခွုံနိုငျကွမယျဆိုတဲ့ သုံးသပျမှု၊ ယူဆမှုကို ဘယျလိုမွငျပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ Side-by-Side သှားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပွညျတှငျးက အရှိနျမွှငျ့မှသာလြှငျ ပွညျပကနေ အရေးထားလာမှာ ဖွဈတယျ။ ပွညျတှငျးမှာ အခုဖွဈနတေဲ့ Defensive War လို့ပဲပွောပွော၊ Guerrilla စဈလို့ပဲပွောပွော အဲဒါတှကေ အခရာကပြါတယျ။